IRD to Put Tax Stamps on Illegally Imported Liquors | Myanmar Business Today
HomeBusinessIRD to Put Tax Stamps on Illegally Imported Liquors
IRD to Put Tax Stamps on Illegally Imported Liquors
Internal Revenue Department announced on August 17 that the department will allow illegally imported foreign-made liquors to put an A1 tax stamp if owners pay taxes.
This is, the department said, part of the move to support importers, who import foreign-made liquors legally so that they do not suffer any loss when competing with other illegal importers in the domestic market.
The department will provide that service through the one-stop service system from September 1 to 30 as an operation.
Those who want to have their imported liquors tax-stamped will have to submitadeclaration form to the respective Township Revenue Offices between August 21 and 28 to make the liquors in possession legal.
The department will not accept the declaration forms submitted after August 28 and will take legal measures if anyone sells the illegally imported foreign-made liquors during the operation period.
The Ministry of Commerce has allowed the importation of foreign-made liquors on May 25, this year.
ပြည်တွင်းသို့ တရားမဝင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်အမျိုးမျိုးတို့ကို ကျသင့်အခွန်အကောက်များ ပေးဆောင်စေပြီး A1 အမှတ်အသား(ခြင်္သေ့) အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ကပ်နှိပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ကကြေညာသည်။
ပြည်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်အမျိုးမျိုး တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ရရှိလာမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း နိုင်ငံခြားဖြစ်အရက်များ တရားမဝင်တင်သွင်းရောင်းချနေသော လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချရာတွင် နစ်နာမှုမရှိစေရန် ထိုသို့အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ပေး ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်း စီမံချက်အား One-Stop Service (OSS) စနစ်ဖြင့် (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစီမံချက်သည် မိမိလက်ဝယ်တွင်ရှိနေသော တရားမဝင်အရက်အမျိုးမျိုးကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည့်ကာလကိုသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၈-ရက်နေ့အတွင်း သတ်မှတ် ထားသည်။ အဆိုပါကာလ အတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများသို့ အချိန်မီ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။
စီမံချက်ကာလအတွင်း ထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်သည့် တရားမဝင်အရက်အမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ကြေညာလွှာ နောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ၂၈-ရက်နေ့နောက်ပိုင်း တင်ပြလာသည့်ကြေညာလွှာများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ စီမံချက်ကာလအတွင်း တရားမဝင်အရက်များရောင်းချနေကြောင်း တွေ့ရှိပါကလည်း တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
စီမံချက်ကာလကုန်ဆုံးပြီးနောက် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှစ၍ တရားဝင်အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော နိုင်ငံခြားအရက်အမျိုးမျိုးကို လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီလက်ကားရောင်းချခြင်းများအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားသည်။
နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်အမျိုးမျိုးကို ပြည်တွင်းသို့ တရားဝင်တင်သွင်းရောင်းချနိုင်ရန် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၅-၅-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈ / ၂၀၂၀) ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Previous articleK59 Billion Loans for Teashops and Restaurants
Next articleGovt Offers Free Electricity Bill for Four Months